I-Stuzzicheria Rotisserie ne-Gastronomy - Isinkwa se-Sicilian ne-Delights Messina
I-Stuzzicheria Rotisserie Gastronomy Bread kanye ne-Sicilian Delights
Ubuhle be-Typical Messinese Gastronomy ngqo ekhaya lakho.
Ukudla okujwayelekile kweMessina, Isitolo sikaFry e I-focacceria yendabuko ngokuhle kakhulu izibiliboco yesiko le-gastronomic Messina neSicilian. Izitsha zokuqala, rustic, ama-buns, amakhukhi nezinhlobo eziningi zokuhle isinkwa esisha phenya nsuku zonke kusuka kumabala wokudlela ukukunikeza izinsuku ezigcwele ukunambitheka.
I-Gastronomy Rotisserie kanye ne-Typical Messinese Snacks: Siyakwamukela ku-Sicilian Bread and Delights
Ukujabulela ukunambitheka okuthokozisayo nokwangempela kungukuhleleka kosuku ngo- Isinkwa SaseSicily Nenjabulo, ejwayelekile I-Stuzzicheria e Deli IMessina elungiselela izinto eziningi ezinhle nsuku zonke. Isinkwa SaseSicily Nenjabulo kubuye kube kuhle kakhulu I-Focacceria e Isitolo sikaFry. I- iziphakamiso ezijwayelekile ze-gastronomic balapha cishe okungenamkhawulo: kusuka ama-buns ai rustic, edlula izibiliboco ezilingayo futhi amakhono bendabuko. I-Arancini, inqola ye-mozzarella, amashidi, san daniele, i-pasta ebhakwe, i-lasagna, i-pasta alla norma, izifundo eziyinhloko, amasaladi nama-side dish, okungcono kunokunye: lapha uzohlala ukonakala ngokuzikhethela. Imenyu enikezwa yindawo yokudlela ibuye inezinketho eziningi ze- i-yummy focaccias, ilungiswe kusetshenziswa izithako zangempela kunhlanganisela eyenzelwe ukuthuthukisa iphunga nokunambitheka.
I-Focacceria ne-Rotisserie enesevisi yasekhaya: izidlo ezi-Messina ezilungele ukuphakwa etafuleni
Ama-gourmets nabo bonke abathandi be- ukudla okuhle bazothola kwimikhiqizo yalokhu Isitolo sikaFry e I-Messina Gastronomy ejwayelekile izinjabulo zangempela abangeke besakwazi ukuzenza ngaphandle. I-classic ithandwa kakhulu I-Stuzzicheria ukujatshulelwa khona lapho noma ukugoduka nayo, inikela ngezibiliboco eziningi ezihlale zilungiswa ngezithako zangempela. Lapho I-Rotisserie ne-Typical Messina Gastronomy futhi inikezela ngenkonzo ye- ukulethwa ekhaya ekubekweni. Ngaleyo ndlela unganambitha bonke ubuhle be amakhono ajwayelekile e-Messina ngokunethezeka ekhaya. ufulawa zezinhlobo eziningi ezahlukahlukene, ushizi ojwayelekile, imifino yesizini, inyama yokuqala yokuzikhethela nentshisekelo enkulu: zicabange zonke lezi zithako zihlanganiswe ngokuhlakanipha ndawonye futhi uzoba nombono wobuhle obuzothola nsuku zonke lapha. Woza uzonambitha futhi ngeke usakwazi ukwenza ngaphandle kwazo.
Ikheli: Nge-Adolfo Celi (Umgwaqo Wangaphambili Wombuso 114), 46
Ucingo: 090 9214938
Umakhala ekhukhwini: 320 9784567
Ifasitela lesitolo: www.paneedelizie.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 03623110834